Website တိုင်းဖွင့်မရတဲ့ပြဿနာ — MYSTERY ZILLION
March 2016 in Internet & Email
အားလုံးပဲ မင်္ဂလာပါ အကို အမတို့။
ကျွန်တော့ Desktop မှာ ဝက်ဆိုက်တော်တော်များများကိုဖွင့်မရပဲ ဖြစ်နေပါတယ်။ FB, Twitter, Gmail , စတာတွေဖွင့်မရပါဘူး။ www.google.com တော့ရပါတယ်။ မရတဲ့ဟာတွေဘယ်လိုမျိုါ်ပြလဲဆိုတော့ ERR_CONNECTION_REFUSED တို့ လိုမျိုါ်ပြပါတယ်။
လိုင်းက Wifi Router ကနေယူသုံးပါတယ်။ တစ်ခြား ဖုန်း ကွန်ပျူတာနဲ့ဖွင့်ရင် အကုန်ပွင့်ပါတယ်။ ကူညီပေးကြပါဦး။
/flushdns /release လိုဟာမျိုးလည်းလုပ်ကြည့်ပြီးပါပြီ။
Anti-virus နဲ့ anti-malware software လည်း uninstall လုပ်ကြည့်ပြီးပါပြီ။
C:\_Windows\_System32\_drivers\_etc\_hosts ထဲမှာလည်း ပုံမှန်အတိုင်းပါပဲ။
Browser တိုင်းမှာ မရတဲ့အကြောင်း အတူတူပြပါတယ်။
ကျေးဇူးပြုပြီး အလင်းပြကူညီပေးကြပါဦး အကို အမတို့။
Which browser are you using ? can you try with other browser ?
I use Google Chrome (Version 49.0.2623.87 m) and Firefox Beta (Version 44.0b6). Sometime, I I also use Opera but not frequently. I already cleaned all the cache and history. It's more look like infected by malware or something, but I'm not sure. I've no idea for that. It's really mess up me! Help, brother. (
April 2016 Administrators
တစ်ခါမှတော့ အဲလို မဖြစ်ဖူးဘူး။ malware တွေ virus တွေ အကုန်လုံးကော ပြန်စစ်ပြီးပြီလား ? ကြည့်ရတာ registery တစ်ခုခု က ပြဿနာ ဖြစ်နေပုံပဲ။
April 2016 edited February 2018 Registered Users
အဲ့ကြောင့် Anti Malware နဲ့တစ်ခုပြီးတစ်ခု လိုက် Scan ကြည့်တာ ဒါပေမယ့် အဆင်မပြေပါဘူးဗျာ... ခု www.google.com တောင် မပွင့်တော့ဘူး... Registry အကြောင်း ကောင်းကောင်းမသိတော့ အဲ့ထဲရမ်းမကလိရဲဘူး။